Wararkii Wargeyska Dawan Cadadkii Maanta | Somaliland.Org
Wararkii Wargeyska Dawan Cadadkii Maanta
November 24, 2010	Xiisad Ka Taagan Wefti Wasiirro Iyo Siyaasiyiin Puntland Ka Socda Oo Gaadhay Buuhoodle
Buuhoodle (Somaliland.Org)- Wefti ballaadhan oo ka socda xukuumadda maamul goboleedka Puntland iyo madaxdhaqameedyada maamul goboleedkaas ayaa shalay galab soo gaadhay magaalada Buuhoodle , iyada oo xukuumadda Somaliland hore uga digtay in siyaasiyiin ka socda maamulkaasi ay soo gaadhaan magaalada Buuhoodle iyo deegaanada kale ee ay ka socdaan dedaalada nabadda lagaga dhex islaaxinayo labada beelood ee ood-wadaagta ah ee dhawaan shaqaaqadu ku dhex martay deegaanka Kalshaale oo u dhexeeya Qirilugud iyo Buuhoodle.
Weftigan culus ee ka socda dhinaca Puntland ayaan la sheegin ujeedada socdaalkooda xiligan ee magaalada Buuhoodle, waxaanay isugu jiraan Wasiirro, Siyaasiyiin iyo todoba Isin oo isugu jira Garaado, Boqoro iyo Suldaano, waxaa hogaaminaya Wasiirka Kalluumaysiga Maxamed Jaamac Faarax oo ka soo jeeda deegaanka Buuhoodle. Waxa kale oo ka mida guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Puntland Xaaji Weerar, Suldaan Garaase iyo Boqor Cabdillaahi Xariir Dabar-gooye oo isna ka soo jeeda gobolka Sool.
Socdaalka Weftigan ayaa dareen cabsi leh iyo xiisad ka abuuray magaalada Buuhoodle, waxaana dadwaynaha deegaankaasi ay ka cabsi qabaan in isku dhac ciidan dhex maro Somaliland iyo Puntland oo khilaaf xuduudeed u dhexeeyo.
Dhinaca kale wada hadalladii la doonayay in markii ugu horaysay goob la isugu keeno labada beelood ee shaqaaqadu dhex martay oo lagu waday in maanta qabsoomo ayaa dib loo dhigay ilaa maalinta sabtida ee fooda inagu soo haysa.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Mudane Cismaan Garaad Soofe digniintii uu u jeediyay Isniintii Puntland waxa uu yidhi “Waxa jira oo aan doonayaa inaan sheego koox siyaasiyiin ah oo ka soo jeeda meesha la yidhaahdo Puntland oo ay Wasiirro iyo rag siyaasiyiin ah oo doonaya inay yimaadaan meesha lagu wada hadal siinayo beelahaas, ma ogolin in wax shaqaaqo ah iyo wax isku dir ah iyo wax dhibaato ah laga dhex dhaliyo labadaasi beelood ee arrintoodu meesha fiican marayso waxaanay arrintoodu taagan tahay wada hadal iyo meeshii lagu wada hadli lahaa. Arrinta ay u socdaan waa inay shaqaaqo hor leh iyo isku dirid ay ay ka sameeyaan. Waanu uga digaynaa kooxda Wasiirrada sheeganaysa iyo dadka kale ee siyaasiyiinta ah ee la socda waxaanu uga digaynaa inay yimaadaan deegaanada Buuhoodle ee ay ka socdaan nabadeynta. meel kasta oo ay nimankaasi rabshooleyaasha ahi ka soo galayaan deegaanka ee ka imanaya Puntland u dul qaadan mayno. Anagoo aan dawlada waxba ka sheegayn. Waxaanu ka hadlaynaa waa kuwa ka soo jeeda deegaanka. Ciidamadayaduna waa u heegan arrintaasi amar baanay u haystaan inay ka celiyaan meel kasta oo ay ka soo geli karaan.”
“Kooxaha nabad diidka ah ee joogta Buuhoodle iyo agagaarkeeda ee qaska iyo nabadgelyo darrada ka wada uma dul qaadan karno waxaanu iyaga qudhooda leenahay dadka ha ka daayaan dhibaatada ay ku hayaan ee isku diririda ah,”ayuu yidhi Md. Cismaan Garaad Soofe.
Wasiir Ku Xigeenku waxa kale oo uu ugu baaqay dawlada Itoobiya inay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada deegaamada Buuhoodle u dhow iskana kaashadaan sidii tallaabo looga qaadi lahaa kooxaha nabad diidka ah.
Ismaan Dhaaf Ka Taagan Deegaamo Ka Tirsan Gobolka Salal
Saylac (Somaliland.Org)- Maayarka Degmada Saylac ee gobolka Salal Maxamed Cumar Xaddi (Cawad), oo ay weheliyaan masuuliyiin kale oo uu ka mid yahay taliyaha qaybta booliska gobolka Salal Cabdirashiid Maxamed Caateeye ayaa shalay gaadhay deegaanka Fiqi-aadan oo ka tirsan degmada Garbo Dadar oo ka mid ah degmooyinkii cusbaa ee xukuumaddii hore magacawday. halkaasi oo dhawrkii maalmood ee u danbeeyay ay ka jirtay xiisad muran iyo ismaan dhaaf ah oo ka dhalatay beero cusub oo laga samaynayay deegaankaas.
Murankan oo u dhexeeya dadka deegaankaas degan oo ka soo kala jeeda gobolada Awdal iyo Salal, kuwaasi oo isku haya degsiimada iyo beero cusub oo dhinac ka mid ahi doonayo in ay ka yagleelaan halkaas.
Maayerka iyo Sarkaalkaas Booliska ah ayaa halkaasi u tagay markii ay soo waajahday cabsi la xidhiidha in iska horimaad ka dhaco deegaankaas, waxaanay ku booriyeen waxgaradka deegaankaas in la joojiyo wixii nabad gelyo darro ka abuuri kara deegaanadaas.
Maayarka iyo masuuliyiinta la socday waxay kulamo kala duwan la yeesheen wax garadka labada dhinac ee ku muran san deegaanka Fiqi-aadan.
‘Waxa Ugu Weyn Socdaalkayagii Itoobiya in iyadoo la Isku Kalsoon yahay la Isla Jaanqaado’ Dr Gaboose
Hargeysa (Somaliland.Org)-Wasiirka Wasaarada Arrimaha Gudaha Somaliland Md. Maxamed Cabdi Gaboose, ayaa sheegay in xukuumada Itoobiya ay isla qaateen in loo wada shaqeeyo si ka balaadhan xidhiidhkii hore ay ula lahaayeen Somaliland.
Wasiirku wuxuu ku dooday in Itoobiya xidhiidhka iyo Somaliland laga garan karo sidii ay u soo dhawaysay wefdigii madaxweynaha ee uu ka mid ka ahaa.
Wasiirka Daakhiliga, oo wefdigii madaxweynaha kaga hadhay dalka Itoobiya, ayaa sidaasi sheegay shir jaraa’id oo uu qabtay markii uu shalay ku soo guryo noqday dalka.
Dr Gaboose oo ka hadlayay socdaalkaasi wuxuu yidhi “Horta waxaan halkan ka raacay Safarkii Madaxweynaha Somaliland ee tagay Addis ababa waxaan filayaa inaad TV-yada ka daawateen sidii Weftigii madaxweynaha Itoobiya loogu soo dhaweeyay wax allaalle iyo wixii dawladi maamuus lahayd waxay kala hadheen may jirin 80-ka Malyan ee qof ee Itoobiya Raysal Wasaaraha xukuma Ku Xigeenkiisa ayaa soo dhaweeyay oo qaabilay Madaxweynaha waligeedna may dhicin. Raysal Wasaaruhuna wuxuu u qaabilay si aad iyo aad u culus wada hadalkii halkaasi ka dhacayna waxay ahaayeen kuwo aad u soo kordhiyay wax aad u badan labada dalba.”
Dr. Gaboose oo ka hadlayay nuxurka wada hadaladii socdaalkii Madaxweynaha ee Itoobiya iyo kulan uu isagu la yeeshay Wasiirka Arrimaha Fadaraalka ee wadankaasi waxaanu yidhi “Madaxweynuhu intii uu joogay Addis ababa waxaan kula kulmay dhigayga oo ah Wasiirka Arrimaha Fadaraalka Itoobiya oo la mid ah Wasiirka Arrimaha Gudaha waxa hoos yimaad Ha’yadaha na hoos yimaada Wasaarad ahaan. Waxaan ka wada hadalnay sidii labada dal wax u wada qabsan lahaayeen ee Arrimaha Nabadgelyada maamulkaba wixii khibrad ah ee ay na dhaamaan waa dal weyn oo taariikh dheer leh, waa dal soo maray caqabado badan oo wax laga baran karo. Waxa hadda noo furmay in imika wixii ka dambeeya aanu si toos ah u wada xidhiidhno Aniga iyo Wasaaradaasi. Somaliland iyo Itoobiya waa labada dal oo daris ah oo ILAAHAY isku xidhay oo wax badani ka dhaxeeyaan.”
Wasiirka oo ka jawaabayay su’aal la xidhiidhay waxa ugu weyn ee safarkaasi ka soo baxay wuxuu yidhi “Waxa ugu weyn oo ugu horraysa maamul cusub ayaa Somaliland ka dhashay marka maamul cusubi yimaadana dhanka kale in la is barto oo isku ujeedo la noqdo oo la isla jaan qaado ayaa u weynayd. Soo dhawayntayadii iyo hadaladii Raysul Wasaaraha ayaa ka turjumayay rabitaanka Itoobiya ee la xidhiidha Somaliland. Waxa weeye in labadaaasi maamul isla jaan qaadaan iyagoo isku kalsoon oo is aaminsan. Ta labaadna waxay caddeeyeen in arrinta nabadgelyada, haddii ay tahay tababar Ciidan, haddii ay tahay qalabayn iyo macluumaad is dhaafsi. Raysal Wasaaruhu erayada uu isticmaalay waxa ka mid ahaa in Itaalkayaga dhaqaale meel uu na gaadhsiiyo mooyaane’e waxaanu idin kala hadhaynaa ma jirto. Waxa inoo soo kordhay intii hore in ka badan diyaar inay u yihiin inay inagala shaqeeyaan arrimaha Nabadgelyada.
Waxa kale oo soo kordhay Arrimaha Ganacsiga carabka aad ayuu ugu dheeraaday muhiimada ay dekada Berbera leedahay waxaanu ku dheeraaday sidii Ganacsiga ay labada wadan wax u wada qabsan lahaayeen.”
Maxkamada Degmada oo Dib U Dhigtay Dacwad Xasaasi Ah
Hargeysa (Somaliland.Org)- Dacwad xasaasi ah oo loo haysto nin jarmal ah oo lagu waday inay shalay ka bilaabanto Maxkamada Degmada Hargeysa ayaa dib u dhacday ka dib markii Boqolaal qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan Caasimada Hargeysa ay soo buux dhaafiyeen maxkamada horteeda. Si ay ula socdaan dacwadaas oo aad uga yaabisay.
Ninkan Jarmalka ah ayaa loo haystaa filimo dukumantari ah oo dhaqan xumo ah iyo muuqaalo sawiro qaawan oo uu ka duubay Haween reer Somaliland ah oo ku dhaqan Caasimada Hargeysa.
Maxkamada Degmada Hargeysa ayaa shalay ammaankeeda aad loo xoojiyay waxaana la geeyay ciidamo aad u tiro badan hase yeeshee waxa qarqiyay dadweyne aad u tiro badan oo doonayay inay la socdaan waxa ka soo baxa kiiskan oo ay si weyn uga cadhoodeen kuna tilmaameen mid loo baahan yahay in ciqaab adag la mariyo ninkan iyo cidii ka gacan siisayba.
Guddoomiyaha Maxkamada Degmada Hargeysa C/Rashiid Beer-geel, oo saaka saxaafaddu wax ka weydiisay dib u dhaca ku yimid dhagaysiga dacwadan, ayaa sheegay in uu qoraal ku mudayn doono xiliga la gudo galayo dhegaysiga dacwada ninkan loo haysto, waxaanu ku dooday in maxkamadeynta ninkani ay ka furmi doonto xarunta Maxkamada degmada. Guddoomiyuhu oo la weydiiyay warar sheegaya in sababo la xidhiidha dhinaca ammaanka darteed dhagaysiga dacwadan laga bilaabayo xarunta CID-da Hargeysa oo ninkani ku xidhan yahay. Waxa uu sheegay inuu ku adkaysanayo in kiiskani ka furmo oo lagu qaado xarunta Maxkamada.
Waxa dhegaysiga dacwadani dib u dhigay markii dadweyne tiro badani ay isa soo dhoobeen agagaarka Maxkamada ayaa sababo ammaan dib loo dhigay. Dadweynihii tagay Maxkamada ayaa ka cadhaysnaa kiiskan waxaanay soo jeedinayeen in ninkan lagu fuliyo shareecada Islaamka.
Hal Qof Oo Ku Dhintay Shil Baabuur
Hargaysa (Somaliland.Org)- ALLE ha u naxariistee waxa shalay shil baabuur ku geeriyooday Xaaji Maxamed Xirsi Yaasiin (Camu) oo ka mid ahaa xujaajtii sannadkan oo gudatay waajibaadka Xajka, oo shalay markii uu ka soo degay madaarka magaalada Berbera uu gaadhi kula qalibmay meesha la yidhaahdo Darigodle ee u dhaxaysa Berbera iyo Hargaysa. Sidoo kale waxa shilkaasi ku dhaawacmay Mulkiilaha Sacaadadiin Supermarket.
ALLE ha u naxariistee Xaaji Maxamed Xirsi Yaasiin (Camu) shalay galab ayaa lagu aasay xabaalaha Xeedho ee waqooyiga magaalada Hargaysa, waxaana aaskiisa ka qayb galay boqolaal dadwayne ah oo kamida shacbiga ku dhaqan Caasimadda Hargaysa.
Previous PostDr. Gaboose Oo Ka Waramay Kulan Uu La Yeeshay Wasiirka Faderaalka ItoobiyaNext PostWar Saxaafadeed Kooban Oo Ka Hadlaya Sacodaalkii Madaxweynaha Somaliland Ku Joogay Somaliland	Blog